डाक्टरकी छोरी एमबीए अध्ययनरत छात्रा कारको डिक्की भित्र मृत अवस्थामा फेला - Nepal Insider
डाक्टरकी छोरी एमबीए अध्ययनरत छात्रा कारको डिक्की भित्र मृत अवस्थामा फेला
January 19, 2020 932
काठमाडौं । एक भारतीय मुलकी युवतीमो अमेरिकामा मृत्यु भएको छ । विगत १८ दिनदेखि हराइरहेकी भारतीय–अमेरिकी विद्यार्थीको श व उनको कारको डिक्कीमा फेला परेको छ । जनवरी १३ मा ३४ बर्षीय सुरिल डाबावालाको श व शिकागोको वेस्ट गारफिल्ड पार्कबाट फेला पारेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । श रीर कम्बलमा बेरिएको अवस्थामा डिक्कीमा राखिएको थियो । सुरिल शिकागोको लोयोला कलेजमा एमबीएकी विद्यार्थी थिइन् । उनी डिसेम्बर ३० देखि घरबाट हराइरहेकी थिइन ।
सुशीलका बुबा अशरफ डाबावाला स्चमबर्ग क्षेत्रमा एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुन् । उनको परिवार मूलतः गुजरातको हो । सुरील बे पत्ता भएपछि परिवारले भेट्टाउनेलाई करीव १ करोड भन्दा धेरै इनाम दिने घोषणा गरेका दिए । सुरीलका बुबाका अनुसार उनी डिसेम्बर ३० मा जिम जान भनेर घर छोडेकी थिइन । सुरिललाई अन्तिम पटक कार चलाउँदै गरेको देखिएको थियो ।
सुरील धेरै दिनसम्म नभेटिएपछि परिवारले एक निजी जा सूसको सहयोग दर्ता गरे । जब उनले पुलिस र सुरिलको परिवारको उपस्थितिमा कार खोले, त्यसमा कम्बलमा बेरिएको अवस्थामा सुरीलको ला श भेटियो । पुलिसले पो स्टमा र्टम रिपोर्टमा सुरीलको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन नसकेको बताएको छ । शिकागो प्रहरीहरू अब वैज्ञानिक रिपोर्टको पर्खाइमा छन् । यो आइपुग्न को लागी एक महिना लाग्न सक्छ ।
Prevतिन करोड नेपालीको जित ! गरिब दु:खिको भगवान रबि लामिछानेले पाए न्याय ! चितवनमा उर्लियो जनसागर ,दालतकै अगाडी खाए कसम[ भिडियो सहित ]
Nextप्रहरीलाई र्‍यापमार्फत ज वा फ दिँदै भिटेन, ‘सुपरस्टारः स्टोरी अफ माई लाइफ…’
अन्ततः कु’टाइको कुरा बल्ल मिल्यो,अङ्गालो हालेर रुदै मागे मा’फी,यस्तो भयो सहमति,सबैका अभिभावक मिडियामा (हेर्नुहोस भिडियो)
अमेरिकी सेना हटाउन माग गर्दै इराकमा विशाल प्र’द’र्शन